DAAWO: Joshua oo ka badiyey Klitschko
R/Wasaaraha Xukuumada Faderalka Soomaaliya Oo La Kulmay Danjiraha Dowladda Imaaraadka Carabta U fadhiya Soomaaliya Afhayeenka Ciidanka Police-ka Soomaaliyeed Oo Ka Warbixiyay Dhacdo Lagu Dilay 2-Carruur Ah Safiirka Talyaaniga Ee Soomaaliya Oo Wasaaradda Warfaafinta Qaranka Uga Tacsiyeeyay Geeridii Agaasimihii Radio Muqdisho Meydadka 2-Caruutr Ah Oo Laga Helay Degaanka Garsbaaleey Ee Duleedka Magaalada Muqdisho Wasiirka Cadaaladda XFS Oo Ka Qayb Galay Kalfadhigii 37-aad Ee Golaha Wasiirada Cadaaladda Carabta Heshiis Dhexmaray Wasaarada Warfaafinta JFS Iyo Safaarada Dalka Chaina Ee Muqdisho Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Oo Kormeeray Xarunta Waaxda Caafimaadka Dowlada Hoose Ee Xamar Madaxweynaha Puntland Oo Maanta Daah Furay Xarunta howlgelinta Hay'adda Maareynta Macluumaadka Kheyraadka Biyaha R/Wasaaraha Federalka Oo Muqdisho Ka Furay Kulan Wadatashi ah Looga Hadlaayo Taaba Gelinta Geedi Socodka Dowladnimada Xilliga Kala Guurka Ah Wasiirka Cadaalada Xukuumada Federalka Somaaliya Iyo Wafdi Uu hogaaminayo Oo Gaaray Magaalada Qahira Dalka Masar Nin Ku Dilay Magaalada Muqdisho Xaaskiisa Oo U Dhashay 12-Caruur Ah (Dagayso) Duqa Magaalada Muqdisho Oo Maanta Dhagax Dhigay Dhismaha Cusub Ee Safaari Aparment-2.
Sunday April 30, 2017 - 17:24:03
Cayaartan oo ah feerka miisaanka culus ayaa garoonka Wembley ku dhex martay Anthony Joshua oo Britain u dhashay iyo Wladimir Klitschko oo mar haystay horyaalka feerka miisaanka culus, una dhashay Ukraine.
Wareeggii 11aad ayaa Klitschko markii 3aad dhulka la dhigay, ka dibna waxaa la joojiyey cayaarta, markii inta uu istaagay uu misna dhacay. Anthony Joshua ayaa sidaas ku difaacday suunkii uu haystay ee IBF, wuxuuna sidoo kale gacanta ku dhigay WBA iyo IBO oo ah suumanka feerka miisaanka culus kuwa ugu sarreeya.
Wladimir Klitschko oo 41 jir ah ayaa sidan u sheegay Sky Sports "ninkii ugu wanaagsanaa ayaa caawa guulaystay, waxayna ahayd dhacdo ku weyn feerka. Laba akhyaar ayaa dagaallamay. Anthony ayaa maanta fiicnaa. Waa murugo in aanan caawa guulaysan. Waxaan qorshaynayey in aan guulaysto, balse ma aysan dhicin. Laakinse xushmad badan ayaan u hayaa Anthony. Hambalyo” ayuu yiri Klitschko.
Joshua ayaa isna Sky Sport la hadlay. "Maxaa kale oo aan oran karaa? 19-0, 3 sano iyo bar aan cayaarta ku soo jiray. Sidii aan hore u iri, ma dhamaystirni, laakin waan dadaalayaa, haddii aadan ka qayb qaadanna waa guuldarraysanaysaa. Sida uu feerku dhigayo, qabkaaga irridda ayaad uga soo tagaysaa, waxaanad xushmaynaysaa qofka kaa soo hor jeeda. Sidaa darteed waxaan si weyn u xusayaa Wladimir Klitschko” ayuu yiri
Isagoo weli aan ka degin xayndaabkii cayaarta ayuu Anthony Joshua oo 27 jir ah farriin u diray Tyson Fury oo isna hore uga badiyey Wladimir Klitschko 2015, isagoo ka dalabaday inay wada cayaaraan.
90,000 oo qof ayaa fadhiyey garonka Wembley oo cayaarta daawanayey, halka malaayiinna ay TVyada kala socdeen.
Source: Astan Sports
Daawo: Raisalwasaha somalia oo qiray dhibta jirta ee somalia
Daawo: Sawirada Xarunta Baarlamanka Puntland amnigeda sida loo sugayo
Daawo: Faysal Cali Warabe iyo siyasada somaliya maxa kala haysta?